Nandritra ny fikatonan’ny sisin-tany : misy tranga Covid-19 roa vaovao avy any ivelany | NewsMada
Nandritra ny fikatonan’ny sisin-tany : misy tranga Covid-19 roa vaovao avy any ivelany
Par Taratra sur 28/10/2021
Nisy tranga roa vaovao Covid-19 avy any ivelany tonga teto Madagasikara, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly. Tokony ho mailo, hanamafy ny fepetra ara-pahasalamana sy ny firosoana amin’ny vaksiny ny rehetra, manoloana izany.
Tranga roa niseho nandritra ny fikatonan’ny sisin-tany izany ary efa nahazo ny fitsaboana avy hatrany ireo olona roa ireo. “Roa izany efa maro”, hoy ny eo anivon’ny minisitera. Na izany aza, sitrana izy ireo ary tsy misy ahina ny fahasalamany. Tsiahivina fa na mbola nikatona aza ny sisin-tany, nisy fiaramanidina avy any ivelany tonga teto Madagasikara nitatitra ireo olona nomena fahazoan-dalana manokana noho ny antony samihafa (fianakaviana, asa…), niainga amin’ny fanapahan’ny filankevitry ny minisitra.
Etsy an-daniny, tsy mbola nisy tranga vaovao voatily fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 kosa tamin’ireo olona nandeha fiaramanidina avy any ivelany rehefa nisokatra ho an’ny sidina anatin’ny faritry ny ranomasina indianina ny sisin-tany, ny 23 oktobra teo, araka ny fanazavana azo.
Fanentanana hanao vaksiny
Hisokatra ho an’ny sidina rehetra avy any Eoropa kosa ny seranana eny Ivato, ny 6 novambra izao, araka ny toromariky ny fanjakana. Efa nohamafisina ny fanaraha-maso ny olona tonga rehetra avy any ivelany niarahana amin’ny fampitaovan’ny Japoney, tamin’ity herinandro ity. Manoloana izany, manentana ny vahoaka hanao vaksiny hiarovan-tena sy ny ankohonana ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Misy safidy roa amin’izao fotoanan izao ny vaksiny azo sitrahina. Mbola 2% amin’ny sokajin’olona (18 taona no ho miakatra) tokony hanao ihany no nahavita izany hatramin’izao.
Fanajana ny fepetra ara-pahasalamana
Entanina koa ny olona 50 000 efa nisitraka ny fatra voalohany tamin’ny Astrazeneca tsy nandalo intsony nandray ny fatra faharoa. “Tsy mahomby ny fiarovana raha tsy feno ny fatra roa ilaina ho an’io karazany io”, hoy ny teknisianina.
Ankoatra izany, tokony hamafisina sy ho hentitra ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana : arovava orona, elanelana… iarahana amin’ny mpitandro filaminana, mpitatitra, toerana ifamezivezen’ny olona. Ny manampahefana sy ny mpanao politika anefa efa tsy maneho izany fanajana fepetra izany intsony. Tsy mbola vita ny ady… Mbola mampanahy ny covid-19, amin’izao fahatongavan’ny sidina avy any ivelany izao.
Niverina nihiboka indray ny mponina
Ho an’ny any Sina manokana, faritra iray ahitana mponina efatra tapitrisa niverina nihiboka noho ny firongatry ny valanaretina coronavirus indray.
Vonjy A. sy Synèse R.
Antontanisa ho an’ny Covid-19 eto Madagascar, hatramin’ny omaly :
Tranga : 43 625
Maty : 963
Tranga : 244 055 387
Maty : 4 958 961